I-50 YEENWELE EZIMFUTSHANE EZIFUTSHANE ZENWELE ZAMADODA (2021 IZITAYILE) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-50 yeeNwele eziFutshane eziFutshane zaMadoda
Izinwele ezimfutshane emadodeni ziya kuhlala zikwisimbo. Izinwele ezimfutshane zigcinwa kancinci, zibudoda kwaye kulula ukuzenza. Ngefade okanye i-undercut emacaleni nasemva kudityaniswe nokushunqulwa okufutshane ukuya kuthi xhaxhe phezulu, zininzi iinwele zamadoda ezipholileyo ekufuneka ziqwalaselwe. Ukusuka kwiklasikhi ye-buzz yeklasikhi ukuya kwikama langoku ngaphezulu kwencopho yesityalo esitsha, iinwele ezimfutshane ezidumileyo zinokubonakala zihamba kakuhle kwaye zinike ukhetho olungenamda. Emva kwayo yonke loo nto, iinwele ezimfutshane zamadoda akufuneki ukuba zithandike; ezi ndlela zangoku kunye nezakudala zinokuba zi-edgy, zodidi, kunye nesitayile. Ukukunceda ukhethe ukusika okufanelekileyo, jonga ezona zinwele zifutshane zibalaseleyo zamadoda ukuze ungene kwi-2021.
1Izitayile ezimfutshane zaMadoda
1.1Iinwele ezimfutshane zeSpiky ezinamacala aPhelileyo
1.2Ikhefu elifutshane ngaphaya kokuPhela
1.4UKesare Crop Phezulu kuphele
1.5Imfutshane emfutshane eneeTapered Sides
1.6Ukuphela kweenwele eziFutshane eziFutshane
1.7Mfutshane ngeNwele eziBrashiweyo eziMva nge-Undercut
1.8Icandelo elifutshane leClass Side Fade
1.9Mfutshane Mohawk Fade
1.10Ukuphela okuPhakamileyo okuPhakamileyo ngeNwele eziMiselweyo eziMiselweyo
1.13Ukuphela kwerazor ephezulu ngesityalo esenziwe ngombala
1.14Ephakamileyo kunye noTight
1.15Ukubhrasha phezulu kunye nokuThuthwa ngasemva ngeTaper yeklasikhi
1.16Dibanisa ipompo kunye neLade Fade kunye neEdge Up
1.17Ukuphela kweBald ephantsi kunye neCandelo elisecaleni
1.18I-Undercut Back Undercut kunye neendevu
1.19Icala leBrashi phezulu kunye neTaper Tade ephantsi
1.20Mid Razor Fade kunye neComb Over
1.21Iinwele ezimfutshane eziMessi
1.22Mfutshane I-Hawk Hawk ene-Fade ephantsi kunye neendevu
1.23I-Angular Brush Buyela ngeFade ePhakamileyo
1.24I-Buzz Sika ngeMilo ePhakamileyo kunye neFade ePhakamileyo
1.25Ukucheba iinwele rhoqo ngeTouch
1.26Ulusu oluphezulu luphela kunye nokuDibanisa okude
1.27Quiff ngeSikhumba esiPhezulu esiFipheleyo kunye neendevu
1.28Icandelo elinzima kunye neTaper Fade
1.29Ukuphela kwexesha elifutshane kunye noMgca oPhakamileyo kunye neBrashi ePhakamileyo
1.30Ukuphela okuphantsi kunye neQuiff
1.31Ukuqhawulwa koQeqesho olunqamlezileyo ngeLide Slick Back
1.32Ukuphela okuphezulu kweTaper kunye neNxalenye kunye neenwele eziSpiky
1.33Isityalo saseFransi esiMessy kunye nolusu luphele
1.34IPompadour yanamhlanje eneTaper Fade kunye neendevu
1.35I-Quiff ye-Textured kunye ne-Tapered Sides kunye neendevu
1.36I-Buzz Sika ngeeNdawo eziMfutshane
1.37Iphele ngeNwele eziBrashiweyo
1.38Ukuphela kweTaper ephantsi kunye neNxalenye kunye noMbhalo oCwangcisiweyo oBuyileyo
1.39Ukudibanisa okuQinisekileyo ngeRazor Fade kunye neendevu
1.40Amacandelo amafutshane aneeNwele eziPhezulu kunye neeNwele eziCociweyo
1.41I-Curly Crew Sika ngeCala eliCociweyo leNwele kunye neMiddle Fade
1.42Icandelo Elinzima Ukudibanisa Ngaphezulu kunye neendevu
1.43Ukuphela kwetempile ephezulu ngeNwele emthubiweyo eneNwele
1.44Iinwele zeSpiky ezinombala kunye neMiddle Fade kunye neEdge Up
1.45Ulusu oluphezulu luphela kunye neSpiky Quiff
1.46Izinwele ezithunyelweyo ngeTaper ephantsi kunye neendevu
1.47Iinwele ezinamabala aMthubi kunye noLusu luphele kunye noMgca oPhezulu
1.48Ukuphela kweTaper kunye neNwele eziCociweyo eziCociweyo
1.49Izinwele eziPhezulu eziPhezulu eziPhezulu eziPhezulu eziPhezulu
1.50Inxalenye enzima yePompadour eneFade ePhakamileyo
Izitayile ezimfutshane zaMadoda
Iinwele ezimfutshane zeSpiky ezinamacala aPhelileyo
Mfutshane spikes ezimdaka ngamacala aphelileyo kulula ukusebenzisana nawo. Phakathi impandla iyaphela kunye neenwele ezimfutshane kakhulu ngaphezulu, abafana banokusebenzisa i-pomade eyomeleleyo ngokugqitywa kwe-matte kwimbonakalo yendalo, yendalo.
yintoni i-chiron yam
Ikhefu elifutshane ngaphaya kokuPhela
Inkqubo ye- Ikama liphele ibiyintandokazi kwindawo zokucheba iinwele iminyaka ngoku. Ngokuphela okufutshane kumacala nasemva, onke amadoda kufuneka ayenze kukutshayela iinwele kwelinye icala. Ikama ngaphezulu libukeka lilungile nge-pomade emenyezelayo okanye nge-matte wax.
Inkqubo ye- iinwele ezivuthelayo Kupholile, kuqhelekile kwaye kutsha. Buza umchebi wakho wezantsi ukuphela kwetaper idityaniswe mfutshane ukuya ubude obuphakathi busikiwe ngaphezulu . Bhrasha iinwele umva kwaye unyuse isitayile seklasi, kwaye ungeze iindevu ukuze ujonge ubudoda.
UKesare Crop Phezulu kuphele
Izinwele ezimfutshane ezinesiphatho zilula kwaye ziqhelekile. Inkqubo ye- Phezulu kwezityalo Isitayile ngokubhrasha iinwele zakho phambili ukwenza umphetho omfutshane, njengokucheba kukaKesare. Bhanqa iinwele ezimfutshane zamadoda amdaka nge-taper fade ephezulu kunye nomgca wokufikelela ukubonakala kwendalo okubukhali.
Imfutshane emfutshane eneeTapered Sides
Ukuba uneenwele ezimfutshane ezingqindilili, jonga umphambili phezulu kwisitayile. Fumana amacala aphelileyo ukuze ugxininise isitayile ngaphezulu.
Ukuphela kweenwele eziFutshane eziFutshane
Ukuba iinwele zakho zigobile, ukuphela okuphezulu kunye neenwele ezimfutshane ngaphezulu zinokubonakala zintle kwaye zibukeka. Thatha ithuba lomthamo wakho owahlukileyo kunye nokuthungwa. Sebenzisa ilungelo iimveliso zokwenza iinwele ezisongekileyo unokwenza umahluko omkhulu ekutsaleni ngokufanelekileyo le ndlela.
Mfutshane ngeNwele eziBrashiweyo eziMva nge-Undercut
Bhrasha iinwele zakho ezimfutshane ngo ngaphantsi ukwenza le nwele yeklasi. Izinto ezinokubhetyebhetye, ezala maxesha nezingathandekiyo, sisitayile esimangalisayo esijongeka silungile nakowuphi na umcimbi.
Icandelo elifutshane leClass Side Fade
Oku icala icala ijongeka intle kwaye icocekile ngokusika nge ukuphela okuphantsi . Njengenye yeenwele ezilungileyo zeshishini, ungazinxiba eofisini okanye uphume ebusuku ekuhlaleni. Ukugqiba ngokuqinileyo, yongeza icandelo elinzima kunye nokuma.
Mfutshane Mohawk Fade
Ukuphela kwe-mohawk kubonelela ngenene ngamadoda afutshane iinwele ezimfutshane, ukuba ungazikhupha. Ukuqhaqha okuphelileyo kujikeleze indlebe kunye nokuhla kwentamo, kugxininisa i-mohawk emfutshane phezulu. Ngapha koko, umda kunye nentshebe yokufela zizinto nje zokugqiba ezichaphazela kakubi.
Ukuphela okuPhakamileyo okuPhakamileyo ngeNwele eziMiselweyo eziMiselweyo
Le nwele emfutshane ethandwayo enamacala angaphantsi inokwamkela nayiphi na imeko yomntu yesitayile. Okubhaliweyo iinwele ezibuyile umva inika iinwele ezizodwa ngakumbi kunye nokuguquguquka, ngelixa ubude ngaphezulu bukunika ukhetho oluninzi lwesitayile.
Inkqubo ye- abasebenzi abasikiweyo bekusoloko yenye yezona zinwele zifutshane zibalaseleyo. Ngokuthabatha okutsha kwisitayile esiqhelekileyo, fumana i-taper fade kumacala nangasemva. Emva koko spike phezulu ngaphambili kwaye ushiye iinwele ezimfutshane zibhaliwe kwaye kumdaka . Khulisa intshebe epheleleyo okanye usike nje iindiza ngenkangeleko yendoda.
Iifayile zepompadour zangoku zibhetele nge fiphela ngaphantsi . Ifakwe umyalezo ngevolumu, oku ubuqhophololo buyaphela Iinwele ngokuqinisekileyo ziya kuma kulo naliphi na igumbi. Kwindoda enesitayile esoloko ifuna ukusikwa okutsha, okuhle, zama le ndlela yokucheba iinwele ngexesha elizayo xa undwendwela indawo yokucheba iinwele.
Ukuphela kwerazor ephezulu ngesityalo esenziwe ngombala
Indlela emfutshane epholileyo enencakuba ephezulu yokucinga iyinto entle yezemidlalo kunye nemisebenzi yangaphandle, njengoko kulula ukuyilawula kwaye ijongeka imangalisa nokuba uhlamba intloko rhoqo. Ikwayiyo iinwele zamadoda ezilungileyo ukuba uyindoda exakekileyo kwaye awunaxesha lokwenza isitayile.
Inkqubo ye- phezulu kwaye ibambe yinwele emfutshane yakudala yomkhosi. Umahluko wale mihla uquka ukuphela kwetaper kumacala anomphezulu omfutshane kakhulu. Imfutshane kunabasebenzi abasikiweyo kodwa inde kune ukusikwa kwe-buzz , ukuphela okuphezulu kunye nokuxinana kukugcina okuphantsi, ukusika okucocekileyo.
Ukubhrasha phezulu kunye nokuThuthwa ngasemva ngeTaper yeklasikhi
I-brushed up and swept back short hair iyakhohlisa kwaye iyathandeka. Iklasikhi ukusika okucoliweyo igcina amacala kwaye ibuye umva ixesha elide ukuze ijongeke ngakumbi. Kodwa le ndlela yomnumzana eshushu iya kubhenela ngokupheleleyo kumanenekazi.
Dibanisa ipompo kunye neLade Fade kunye neEdge Up
Iinwele ezisefashonini nezala maxesha ezinomtsalane weklasiki. Le comb ekwiqhakra inesini kwaye iyaguquguquka, ngelixa isantya esisezantsi siyenza ukuba ibe lukhetho oluphezulu lokucheba iinwele emadodeni iimilo zobuso ezahlukeneyo kunye neentlobo zeenwele.
Ukuphela kweBald ephantsi kunye neCandelo elisecaleni
Olunye uhlobo olusikiweyo kunye nesitayile esine-twist entsha. Icandelo elisecaleni linika olu hlobo lweenwele zodidi olongezelelekileyo, kwaye inokuba yinto yokutyikitya kwesitayile sakho kuzo zombini izihlandlo ezisesikweni nezingaqhelekanga.
Le nto ingazange iphume ngaphandle kwefashoni inyathele umva phantsi kwendlela yomoya opholileyo ukuya kwisitayile kwaye ijongeka intle ngeendevu ezipheleleyo. Awunakukhulisa intshebe? Funda ezi ngcebiso zingqinisisiweyo khulisa intshebe ngokukhawuleza kwaye uyatyeba . Kwaye okoko iinwele ezirhabaxa yeyona nto iphambili kwindawo yokucheba iinwele, umthungi weenwele ulunge ngakumbi.
uphawu lokunyuka kwe-zodiac kunye nenyanga
Icala leBrashi phezulu kunye neTaper Tade ephantsi
I-modern and fashion forward, le ndlela imfutshane iqala nge-taper fade ephantsi kwaye igcina ubude ngaphezulu. Iinwele ezishinyeneyo emva koko zitshitshisiwe zatyhalwa zaya kwicala lesimbo se-angular. Ngelixa ujonge indalo, inesibindi kwaye iyaphuma ngaphandle kokungakhathali.
Mid Razor Fade kunye neComb Over
Le nwele mfutshane intsha kulula ukuyikhupha kwaye ifuna isitayile esincinci. Isitshixo esiphakathi sigxininisa ubude ngaphezulu, ngelixa i-barbar yamadevu, nangona ikhethwayo, inokuzisa utshintsho olukhulu kwinkangeleko yonke.
Iinwele ezimfutshane eziMessi
Izinwele ezimfutshane zinokufakwa kwisitayile ngeendlela ezininzi ezipholileyo. Uhlobo oluthandwayo lweenwele ezimfutshane kwezi ntsuku lonakele kwaye lubhalelwe ukujonga okungaqhelekanga, kwendalo. Faka isicelo se-matte pomade, i-wax, okanye udongwe ukwenza isitayile esingafunekiyo. Ngesitayile esibukhali, tsala imisonto kunye ukwenza iipiks.
Mfutshane I-Hawk Hawk ene-Fade ephantsi kunye neendevu
Le iinwele ezimfutshane zabafana ziya kukwenza ubonakale ungowesilisa, womelele, kwaye ubuchwephesha bonke ngaxeshanye. Ukuphela okuphantsi emacaleni kunokwenza ukuba iinwele ezingaphezulu zibonakale zigcwele, ngelixa icebo lika a ifeksi yongeza umnxeba omtsha.
I-Angular Brush Buyela ngeFade ePhakamileyo
Le nwele yanamhlanje yokuthambisa iya kukwenza ubonakale umncinci kwaye kulula ukuba uyenze. Iimpawu zokuchukumisa ii-angular zikhangeleka zihle xa kuthelekiswa nokubuyela umva kweklasikhi.
I-Buzz Sika ngeMilo ePhakamileyo kunye neFade ePhakamileyo
Ukusikwa kwe-buzz yeklasikhi kunokubonisa ukumila kobuso bakho, ngelixa ulusu oluphezulu luphela lucoca ucoceko emacaleni. Olu hlobo lweenwele ezimfutshane kulula ukuzigcina kunye nesitayile, ezenza ukuba zilungele abafana abaxakekileyo.
Ukucheba iinwele rhoqo ngeTouch
Yintoni ebangela ukuba oku kuchetywa kweenwele rhoqo kubonakale kulungile bubuninzi, ukuvela okupheleleyo kweenwele ezilungisiweyo. Ngamacala asikiweyo kunye neenwele ezichetyiweyo ngaphezulu, le yenye yeenwele ezimfutshane eziphezulu zamakhwenkwe nabafana abancinci. Ulutsha kwaye lulula kwisitayile, ilungile kubafana abafuna isitayile esitsha.
Ulusu oluphezulu luphela kunye nokuDibanisa okude
Le yindlela entsha, eshushu yokutshayela iklasikhi umva, njengobude ngaphezulu bubukeka bungumjikelo kwaye ngokuthe ngcembe ngokuchaseneyo nokuphakama ulusu luyaphela emacaleni. Kwakhona isitayela sokugcina esisezantsi ukuba ufuna ukuya kwinkwenkwe embi enenwele ezibukhali.
Quiff ngeSikhumba esiPhezulu esiFipheleyo kunye neendevu
Le nwele ye-quiff ilandela imfutshane emacaleni kwaye inde ngaphezulu Iinwele zamadoda ezithandwayo eziye zalawula iindawo zokucheba kwihlabathi jikelele kutshanje. Ubume be-spiky bongeza into eyongezelelweyo kulusu oluphezulu, ngelixa intshebe inokuba yindlela epholileyo yokuyicoca le nto isikiweyo.
Icandelo elinzima kunye neTaper Fade
Olu cwecwe lukhanyayo kunye nomoya lusebenza kakuhle nangawuphi na umbala weenwele, ngelixa i-taper fade yongeza ukutsha kunye nokuphola ehlotyeni. Kananjalo, awuzukuchitha iiyure phambi kwesipili ukufezekisa eli cala lisecaleni.
indlela yokwazi uphawu lwam olunyukayo
Ukuphela kwexesha elifutshane kunye noMgca oPhakamileyo kunye neBrashi ePhakamileyo
Ukubrasha iinwele zakho phezulu kungongeza ivolumu eyongezelelweyo ngaphezulu kwaye wenze ubuso obujikelezileyo bubonakale bu-oval. Ukuphela kwetempsi kunceda ukufezekisa iinjongo ze-oval, ngelixa umgca up wongeza umnxeba wangoku.
Ukuphela okuphantsi kunye neQuiff
Ubuninzi bokuthungwa kwe-spiky ngaphezulu kunokongeza ukugcwala kwinkangeleko yonke, okwenza ukuba iinwele zakho zibonakale ngathi ziyatyeba. Ukudibanisa ukuphela okuphantsi kunye ne-quiff yenye yeendlela ezilungileyo zokuguqula ukujonga kwakho.
Ukuqhawulwa koQeqesho olunqamlezileyo ngeLide Slick Back
Umahluko onqanyuliweyo we-undercut usebenza kakuhle ngohlobo olubunjiweyo lomqolo obuyileyo. Iinwele ezinde ezingaphezulu nazo zinokufakwa kwisitayile ngaphezu kwekomityi yepompadour, kunye pomade wasekunene .
Ukuphela okuphezulu kweTaper kunye neNxalenye kunye neenwele eziSpiky
Iifutshane ezifashisiweyo iinwele zihlala zineendlela ezintle kunye nefade egxile kwamehlo. Kunye amagqabantshintshi blonde kunye nokumila, oku kulunga kweenwele kulutsha kukhwaza inkwenkwe embi. Chukumisa abafazi ebomini bakho kwaye uzame oku kufutshane.
Isityalo saseFransi esiMessy kunye nolusu luphele
IPompadour yanamhlanje eneTaper Fade kunye neendevu
I-Quiff ye-Textured kunye ne-Tapered Sides kunye neendevu
I-Buzz Sika ngeeNdawo eziMfutshane
Iphele ngeNwele eziBrashiweyo
Ukuphela kweTaper ephantsi kunye neNxalenye kunye noMbhalo oCwangcisiweyo oBuyileyo
Ukudibanisa okuQinisekileyo ngeRazor Fade kunye neendevu
Amacandelo amafutshane aneeNwele eziPhezulu kunye neeNwele eziCociweyo
I-Curly Crew Sika ngeCala eliCociweyo leNwele kunye neMiddle Fade
Icandelo Elinzima Ukudibanisa Ngaphezulu kunye neendevu
Ukuphela kwetempile ephezulu ngeNwele emthubiweyo eneNwele
Iinwele zeSpiky ezinombala kunye neMiddle Fade kunye neEdge Up
Ulusu oluphezulu luphela kunye neSpiky Quiff
Izinwele ezithunyelweyo ngeTaper ephantsi kunye neendevu
Iinwele ezinamabala aMthubi kunye noLusu luphele kunye noMgca oPhezulu
Ukuphela kweTaper kunye neNwele eziCociweyo eziCociweyo
Izinwele eziPhezulu eziPhezulu eziPhezulu eziPhezulu eziPhezulu
Inxalenye enzima yePompadour eneFade ePhakamileyo
iitattoos zentsapho zamadoda
ezinkulu ezintathu zokuvumisa ngeenkwenkwezi
iingcuka tattoos amadoda
Ukucheba iinwele zamakhwenkwe akwishumi elivisayo ngo-2019
Itshathi ye-twin yelangatye ye-synastry